RASMI: Thomas Tuchel Oo Xaqiijiyey In Chelsea Ay Xagaaga Iman Doonaan Conor Gallagher Iyo Armando Broja - GOOL24.NET
RASMI: Thomas Tuchel Oo Xaqiijiyey In Chelsea Ay Xagaaga Iman Doonaan Conor Gallagher Iyo Armando Broja
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa shaaciyey, in labada xiddig ee amaahda kaga maqan ee Conor Gallagher iyo Armando Broja ay xagaaga kusoo laaban doonaan Stamford Bridge, isla markaana ay qayb ka noqon doonaan kulamada isku-diyaarinta xilli ciyaareedka dambe ka hor inta aan go’aan kama dambays ah laga gaadhin mustaqbalkooda.
Labadan ciyaartoy ayaa xilli ciyaareedkan bandhig heersare ah ka sameeyey horyaalka Premier League, waxaanay gaadheen heer ay kooxaha ay ku sugan yihiin ay dalbadaan in si rasmi ah looga iibiyo.
Conor Gallagher oo khadka dhexe uga ciyaara Crystal Palace ayaa looga yeedhay xulka qaranka England markii uu wacdaro ka dhigay horyaalka, halka Broja oo weerarka uga ciyaara Southampton uu isaguna ka mid noqday weeraryahannada loogu cabsida badan yahay horyaalka Premier League.
Thomas Tuchel oo warbaahinta la hadlay ayaa la weydiiyey qorshaha kooxdiisa ee labadan ciyaartoy ayaa yidhi: “Marka ugu horreysa way soo laaban doonaan, waanan hubaa sababtoo ah waa ciyaartoydayada.
“Markii aanu amaahda ku bixinaynay iyaga iyo annagaba dan ayay noo ahayd, sababtoo ah waxay noqonayeen ciyartooyo fiican, waxaanay noosoo noqonayeen iyagoo khibrad badan leh.
“Waa ciyaartoydayada, waxaanan doonayaa in ay qayb ka noqdaan ciyaaraha saaxiibtinimo ee xagaaga, inta lagu jiro kulamadaas ayaananu go’aan ka gaadhi doonaa waxa aanu ka yeelanayno.”
Conor Galaghere oo khadka dhexe ka ciyaara ayay kooxo badan danaynayaan in ay amaah ama iib midkood ku qaataan, laakiin Chelsea ayaa iyaduna doonaysa inay ku xoojiso khadkeeda dhexe oo uu shaki ku jiro dhawr ciyaartoy oo sannadkii ugu dambeeyey qandaraasyadooda gelaya, sida N’Golo Kante iyo Jorginho.
Armando Broja ayaa isaguna ka ciyaara weerarka, waxaanu xilli ciyaareedkan u dhaliyey Southampton lix gool oo horyaalka Premier League ah, hase yeeshee fursadda uu kaga ciyaari karayo Chelsea way hoosaysaa marka la barbar-dhigo Galagher sababtoo waxay Blues haysataa weeraryahanno badan sida Timo Werner, Kai Havertz iyo Romelu Lukaku, halka Christian Pulisic iyo Hakim Ziyech ay iyaguna garbaha ka ciyaaraan oo ay sii yaraynayaan fursaddiisa.